Mpanao Gazety Antserasera Yemenita Nandefa Antso Fiarovana Maika Taorian’ny Fandrahonana Azy Ho Faty sy Ny Fijirihana Ny Tranonkalany · Global Voices teny Malagasy
Mpanao Gazety Antserasera Yemenita Nandefa Antso Fiarovana Maika Taorian'ny Fandrahonana Azy Ho Faty sy Ny Fijirihana Ny Tranonkalany
Voadika ny 19 Aogositra 2017 17:34 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy efa nivoaka tamin'ny volana Febroary 2009 ity adika amin'ny teny Malagasy eto ity)
Mohamed Al-Jabali, tonian-dahatsoratry ny tranonkala Akhbaralasr no niharam-boina farany tamin'ny onjam-pandrahonana mikendry ireo bilaogera sy mpanao gazety antserasera ao Yemen. Tamin'ny fanambarana natao omaly, niantso fiarovana i Al-Jabali rehefa nahazo fandrahonana ho faty avy amin'ireo mpitandro ny filaminan'ny fitondrana tao Sanaa renivohitra. Nilatsaka izany fotoana fohy monja taorian'ny nijirihana ny tranonkalany. Nilaza i Al-Jabali fa namoaka votoaty manesoeso tao amin'ny pejiny voalohany miaraka amin'ny sarina rajako sy fanevatevana ny tompon'ny tranonkala, Al-Jabali ireo mpijirika, izay nolazain'i Al-jabali fa mpiasan'ny fitondrana.
Hoy ny soratra amin'ny sary: Nisy votoaty napetraka tao amin'ny pejy voalohan'ny tranonkala voajirika,izay mitondra ny lohateny hoe “Ny sarin'ny rajako Mohamed Al-Jabali”
Nilaza i Al-Jabali fa tezitra noho ny tatitrany antserasera momba ny hetsika ara-politika manohitra ny governemanta ao amin'ny faritra Tihama ao andrefan'ny firenena ny fitondrana. Ahitana lahatsoratra manakiana ny fomba fitantanan'ny fitondrana ny toekarena sy lahatsoratra iray vao haingana nanasongadina antso hampitsaharana ny ‘fampiasam-bolan'ny mafian'ny firenena’ ny tranonkala.
Tao anaty hafatra mailaka, nilaza i Al-Jabali fa natahotra ny ainy taorian'ny fandrahonana azy teo akaikin'ny kianjan'i Al-Tahrir ao afovoan-tanàna ary niampanga mpanolotsaina ambony iray an'ny filoha Yemen Ali Abdullah Saleh ho manohana ireo fihetsika mamely azy sy ny tranonkalany:
I'm writing to you while feeling threatened by imprisonment… I appeal to you to help protect my life as I feel I'm in danger.” Al-Jabali said in an email statement today.
Manoratra aminao aho satria matahotra fandrahonana hampidirina am-ponja … Miangavy anao aho mba hanampy amin'ny fiarovana ny aiko satria mahatsiaro fa tandindonin-doza aho. “Hoy i Al-Jabali tamin'ny fanambarana tamin'ny mailaka androany.
Tsara ny manamarika fa ny raharaha Al-Jabali dia tsy voalohany amin'ny karazany ao Yemen. Maro ireo mpanao gazety an-tserasera sy bilaogera hafa niharan'ny hetraketraka fandrahonana toy izany ary mitombo hatrany ireo mpanafika. Ny vondrom-piarahamonin'ny mpanao gazety dia naneho ny ahiahiny lehibe mikasika ny fitomboan'ny fanafihana sy ny fihamafin'ny fanakanana ny asa soratra manohitra ny fitondrana ataon'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny firenena.
Na dia maro aza ny antso nalefan'ny Sendikàn'ny Mpanao Gazety Yemenita sy ireo fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fiarovana toy ny Komity Miaro ny Mpanao gazety, Article 19 sy ireo hafa, mbola mitombo hatrany ny fanafihana an'ireo mpanao gazety, anisan'izany ireo mpanao gazety antserasera. Heverin'ny maro fa ireo tranonkala ahitana votoaty manakiana ny fitondrana no tena iharan'ny fanafihana matetika ataon'ny olona karamain'ny fitondrana mba hamerana ireo feo manohitra ao amin'ny aterineto.
Anisan'ireo fomba fanao matetika ampiasaina hanorisorenana mpanao gazety sy tranonkala ny sivana amin'ny tranonkala, fanafihana ara-batana sy fandrahonana ho faty amin'ny alalan'ny finday na mifanatrika mivantana.
Tantaran'ny Yemen farany
Amerika Avaratra 25 Jolay 2021
Alzeria 30 Jona 2020